Jaamacadda PSU Garowe oo si Gaar ah u xustay Maalinta Caafimaadka Adduunka – Radio Daljir
Abriil 8, 2015 1:39 b 0
Arbaco, Abriil 08, 2015 (Daljir) —Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowladda Puntland Dr Saadiq Axmed Maxamed Eenow ayaa ka qaybgalay munaasabad lagu maamuusayey maalinta caalamiga ah ee caafimaadka aduunka ayna soo qabanqaabiyeen ardayda kulliyadda caafimaadka ee Jaamacada PSU Garoowe.
Munaasabaddaan ayaa intii ay socotey waxaa lagu soo bandhigay dhibaatooyinka caafimaad ee laga dhaxlo cuntada aan la ilaalin fayadhowrkeeda iyo baaritaano caafimaad oo ay sameeyeen ardayda kulliyadda caafimaadka ee Jaamacadda PSU Garoowe, waxaana ka qaybgalay wasiirka caafimaadka Puntland, gudoomiyaha gobolka Nugaal, gudoomiyaha Jaamacada, macaliinta iyo ardayda Jaamacdda PSU Garoowe.
Xaliimo Sacdiyo Sheekh Cali oo xubin ka ah ururka ardayda kulliyadda caafimaadka Jaamacadda PSU Garoowe ayaa sheegtay in ujeedkoodu yahay sidii ay ula dagaalami lahaayeen waxkasta oo dhibaato ku keenaya caafimaadka shacabka Puntland gaar ahaan degmada Garoowe.
Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdullaahi Ciise Aw-axmed ayaa balan qaaday inuu lashaqayn doono ardayda kulliyadda caafimaadka ee Jaamacada PSU, maamulka gobolkuna ardayda ka caawin doono sidii ay howshoodu ugu fududaan lahayd.
Maxamuud Sheekh Xaamud gudoomiyaha Jaamacada PSU ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay caadaysteen dhaqamo aan caafimaadka u wanaagsanayn ayna muhiimtahay in laysu kaashado si looga gudbo caqabadaha hortaagan fayadhowrka cuntada iyo ilaalinteeda.
Ugu dambayntiina waxaa munaasabadda soo xiray wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland Dr Saadiq Eenow oo kudheeraaday muhiimadda caafimaadka iyo sida ugu haboon ee loojoogtayn karo, waxaana uu ardayda iyo jaamacada u balan qaaday wadashaqayn joogto.
Kadib asaaskii Qaramada Midoobey waxaa 7da April loo aqoonsaday maalinta caalamiga ah ee caafiamadka aduunka oo sanadkasta laga xuso dalalka caalamka, waxaana sanadkaan diiradda lagu saarayaa sidii loojoogtayn lahaa caafiamadka cuntada laquuto.